एमाले आँबुखैरेनीकी अध्यक्ष भन्छिन्– महिला सक्षम छन् भन्ने पुष्टि गर्नेछु - हिमाली पत्रिका	एमाले आँबुखैरेनीकी अध्यक्ष भन्छिन्– महिला सक्षम छन् भन्ने पुष्टि गर्नेछु - हिमाली पत्रिका
२३ असार २०७९, बिहिवार
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्न थाल्यो कच्चा तेलको भाउ
बिहिवार, असार २३, २०७९
साझाले बिजुलीबाट चल्ने तीन वटा बस आजदेखि चलाउँदै, चालक र…
कोरोनाको हालसम्मकै संक्रामक ‘बीए फाइभ’ले चौथो लहरको जोखिम !
काण्डै काण्ड मच्चाएर बाहिरिए अर्थमन्त्री
तत्काल नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्ति नहुने, गृह पाए अर्थ मन्त्रालय छाड्ने…
अनौठो कुप्रथा : जहाँ ८ सय रुपैयाँमै भाडामा पाइन्छ अर्काकी…
मकै बेच्ने दम्पतीलाई कारवाही गर्न प्रहरीमा महानगरको निवेदन
काठमाडौंमा भिक्षा माग्न निषेध, महानगरले निकाल्यो यस्तो सूचना
प्रहरीमा भर्ना खुल्यो, कुन पदमा कति ?
बालेनमाथि खनिइन् करिश्मा, भन्छिन्ः पोलेको मकै र चटपटे तारे होटलमा…
अबको ६ महिनापछि काठमाडौंमा विद्युतको पोल हटाउन थालिने
एमाले आँबुखैरेनीकी अध्यक्ष भन्छिन्– महिला सक्षम छन् भन्ने पुष्टि गर्नेछु
हिमाली पत्रिका प्रकाशित मिती - १० कार्तिक २०७८, बुधवार
नेकपा एमालेको गाउँ तथा नगर अधिवेशन मंगलबार सम्पन्न भएको छ । यही क्रममा तनहुँको व्यास नगरपालिका, भानु नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका र आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको छ ।
सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएका पाँच स्थानीय तहमध्ये आँबुखैरेनीले महिला नेतृत्व पाएको छ । आँबुखैरेनीकी अध्यक्ष बनेकी ४४ बर्षीया मिना अधिकारीको नेतृत्वमा ५३ सदस्यीय गाउँ कमिटि गठन भएको छ । उनी सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भंग भएपछि एमालेको गाउँ कमिटि अध्यक्ष थिइन ।
गाउँ कमिटि अध्यक्ष बनेपछि अधिकारीले महिला नेतृत्व हाँक्न सक्षम रहेको पुष्टि गर्ने बताएकी छिन् । न्युज कारखानासँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले भनिन्, ‘मसँग आँट र साहस दुवै छ । अनुभव पनि छ । मेरो कामले महिलाले पनि नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित हुनेछ ।’
उनले महिलालाई नेतृत्व दिन पार्टी पंक्तीले पनि कन्जुस्याँई गर्ने गरेको बताइन । ‘अहिलेसम्मको परिस्थितिमा कुनै राजनीतिक दलले पनि महिलालाई नेतृत्व सहजै दिएका छैनन् । एक त महिलालाई घरपविारबाटै असाध्यै कठिन छ । त्यो चुनौति पन्छ्याएर राजनीतिमा लागेपछि पनि पार्टीको अन्तरिक राजनीतिमा फेरी संघर्ष गर्नुुपर्ने हुन्छ’, उनले भनिन् । अब पार्टीमा महिलाको सहभागितासँगै नेतृत्वमा पुर्याउन भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ ।
बन्दीपुर गाउँपालिका–१ नाहालमा जन्मिएकी अधिकारीले कक्षा ९ मा पढ्दा अनेरास्ववियू छैटौँमा प्रवेश गर्दै राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी थिइन् । उनी ०५५ सालपछि भने पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा लागेकी थिइन ।
एमालेको गाउँ तथा नगर अधिवेशनबाट जिल्लामा कार्यकारी पदमा न्युन संख्यामा महिला सहभागिता देखिन्छ । शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा विष्णुमाया ढकाललाई सर्वसम्मत उपसचिव बनाइएको छ । भानु नगरपालिकामा रुपा लामा उपसचिव बनेकी छन् । यस्तै व्यास नगरपालिकामा सीता पाण्डे उपसचिव बनेकी छन् ।
एमालेको ८२ वडामा अधिवेशन सकिदा शुक्लागण्डकी नगरपालिका–९ मा गीत महत र आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२ मा सम्झना विक मात्र वडा कमिटि अध्यक्ष बनेका हुन् ।
फिलिपिन्सका राष्ट्रपतिको शपथग्रहणमा विनोद चौधरी सहभागी
काठमाडौंमा पाइला टेकेको ५ मिनेटमै बज्रपात पर्यो भारतीय परिवारलाई
नासाको आरोप : चीन चन्द्रमा अधिग्रहण गर्ने तयारी गर्दैछ
चन्द्रागिरि केबलकारमा फसेका अझै डेढ सय मानिसको उद्दार गर्न बाँकी,…
बुधवार, असार २२, २०७९
चुनावपछि एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्छ : माधव नेपाल
विवाह गर्ने कुनै योजना छैन : कट्रिना
विश्वासको मत नपाउने भएपछि बाग्मती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री शाक्यले राजीनामा दिँदै